Hevitra MPANOHARIANA | Novambra 2010
2010-11-25 @ 12:18 in Ankapobeny
Kisendrasendra avokoa izay tantaraiko eto noho ny asa fivezivezena izay natao. Ny tapakandro marainan'ny 25 novambra 2010 avokoa izy ireto. Ny maraina tokony ho tamin'ny fito ora sy sasany tany ho any dia efa miatrana avokoa indray ireo mpitandro ny filaminana miambina amin'ny lalana fandalovan'ny filohan'ny FAT miala avy any an-tranony mankany amin'ny birao fiasany. Reko ny iray tamin'izy ireo nanao hoe:" Kôzy raha handalo eo leiry le!"... efa tsy ora fandalovany intsony ve matoa miteny izany izy?
Avy eo nifanena tamina soavalivy maromaro sy fiaran'ny FIS anankiray mety hitsena ny olona arovany na hamonjy ny tokantranony angamba. Izay zatra ny fanaony eto Antananarivo dia hahalala fa tsy mahazaka tery anaty fitohanana izany izy ireny na tsy misy olona arovany sy arahiny aza fa tsy maintsy manavatsava ny rehetra sy mampaneno anjombona hatrany. Miaiky aho fa henjana koa ry zalahy ireto raha handeha mafy.
Tamin'ny valo ora latsaka, kamiao iray feno mitandro filaminana ary fitaovam-piadiana no mandeha amin'ny lalana mifanohitra amin'ny zotran'ny fiara rehetra miakatra hatreo amin'ny carrefour mankany Ankatso na Antanimora na Ambanidia na Antsakaviro iny miakatra mivantana mankany Ampasanisadoda na Antsahabe na Mascote fa tsy miodina mandalo ny Medecine araka ny fahafantaran'ny besinimaro azy. Tena hamehana angamba matoa izay sens unique izay no nidirana. Azy tokoa moa ny tany sy ny lalàna ka inona no holazaina?
Mandingana avy hatrany aho, amin'ny sivy sy sasany maraina, fiara tsy mataho-dalana ana-jeneraly kintana telo iray no misosososo sy mandrehitra ny jirony rehetra amin'iny vahilava mankany Ivato iny. Fa dia misy inona loatra hoy aho anankampo no dia maika dia maika tahaka izany? Hay mpitari-dalana fotsiny ihany iny ka maika hikarakara ny fanomanana rehetra. Teo amin'ny tobin-dasantsy Total amin'iny Vahilava iny ihany no nahitako 4X4 feno mpitandro filaminana arifomba fitaovam-piadiana. Somary gaga ny tena. Misy zavatra ve any ho any? Hay mametraka mpiambina manerana ny lalana ry zalahy hisahana ny fiarovana ary fantatra avy hatrany fa hivoaka na handray voromby indray ny filohan'ny FAT raha izao fandehany izao.
Inona tokoa, misy soavalivy sy fiaran'ny FIS mijanona eo amin'ny kihondalana avy any Andohatapenaka hivoaka ny vahilava ary indray koa mpitandro ny filaminana vitsivitsy mitambasy mifanaretsaka manodidina. Fiaran'ny polisy 2 indray no eo amin'ny kihondalana avy any 67ha avaratra andrefana hivily ho any Andohatapenaka. Ny mpitandro ny filaminana moa dia isaky ny kihondalana sy sampanandalana dia misy iray farafahakeliny. Fiara tsy matahodalana fantatra fa an'ny prezidansa roa indray no miatrana avy any amin'ny boulevard de l'Europe na lalambaovao hoy ny olona hivily mankany 67ha avaratra andrefana. Maromaro tokoa ny mpitandro ny filaminana mitam-basy amin'izany rehetra izany.
Mandritra izany fotoana izany dia hay tsy misy fiara na môtô mahazo mijanona amin'ny sisindalana na lalan'ny mpandeha an-tongotra amin'ny lalana rehetra mety handalovan'ny filohan'ny FAT tamin'ity andro ity. Noterena hivily lalana avokoa na fiara na soavalivy rehetra fandrao angamba hibahana tampoka ny lalana alehany. Rehefa nandalo moa ny filohan'ny FAT tokony ho tamin'ny folo ora sy sasany mahery teo dia soavalivy roa sy fiara tsy matahodalana telo no miaraka amin'ny fiara mpitondra azy. Izany hoe tsy nisy mihitsy fiara na môtô nahazo nandeha na mijanona amin'ny lalana nalehany ho fiarovana azy.
Tsy nahazatra ahy indray izay lafiny fiarovana izay ka nahatonga ahy hanoratra eto sady mieritreritra ihany fa tsy nivaha hatreo akory ny olana na dia nandresy aza ny ENY ary na resy tosika aza ny "mpioko" tao amin'ny BANI. Toa mametraka aza izany fa angamba nihahenjana ny toe-draharaha any ambadika any raha niova ho tahaka izao ny fiarovana ny filohan'ny FAT.
Jentilisa 25 novambra 2010 amin'ny 14: 18